Ny tsindrona volamena - Shijiazhuang Yiling Hospital
TCM manana mihoatra ny 5000 taona tantara, dia misy isan-karazany ny fomba hitsaboana.
Ny tsindrona volamena dia iray amin'ireo fototra fitsaboana in TCM.
Ao amin'ny tsindrona volamena nentim-paharazana, ny acupuncturist manapa-kevitra izay manondro ny hitondra ny fandinihana sy nanontany ny marary mba hanao ny aretina araka ny fomban-drazana nampiasaina.
Ny tsindrona volamena dia ny fikambanan'ny acuneedles sy ny moxa. Izany no ampiasaina mba ampidiro eto ny filiform fanjaitra ho any amin'ny anankiray acupoint, fanjaitra dia mety ho fitaovana amin'ny fomba isan-karazany, anisan'izany ny kofehy, flicking, na mihetsiketsika ka nidina mikasika ny hoditra.
Ny fomba moxa dia mampiasa ny fandoroana moxa mba hamenoana setroka toerana ny hoditra amin'ny acupoint sasany, tempering ny hatsiaka sy ny fitantanana ny aretina ny tairina ny hafanana.
Rehefa heverina ny aretina isan-karazany, toerana fitsaboana hafa dia nofantenana mba hanatratrarana tanjona hafa pahasalamana sy ny fitsaboana vokatry. Common karazana loha tsindrona volamena, tanana tsindrona volamena sy ny vatana tsindrona volamena,
Loha tsindrona volamena, dia mifototra amin'ny fiheverana reflexological momba ny loha.
Hand tsindrona volamena, foibe faritra manodidina Nihevitra amin'ny endriky ny tanana.
Ny vokany mifototra amin'ny acupoint sy ny voafidy teknika, tsy manana fifandraisana amin'ny hatsaran'ny fanjaitra. Tsy mitovy acupoint, hafa ny ambany, zoro hafa, teknika hafa (toy ny inona no matetika "nioty", "mangovitra" na "tora-kovitra", inona no tari-dalana) vokany eo ny mandray.
An'arivony ny fitsaboana vokatry no voaporofo fa afaka soa aman-tsara ny tsindrona volamena hitsaboana iombonana manampy fanaintainana, ambany indray fanaintainana, aretin'andoha sy migraines, vanin-taolana, mpiara hafa fanaintainana, Post-miasa fanaintainana, maloiloy, sy ny fitsaboana ny homamiadana.
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny TCM, izahay mandray soa aman-tsara ho toy ny tsindrona volamena sy mahaleo tena fitsaboana manokana.
Nandritra ny fitsaboana ny homamiadana, hozatra atrophy, rheumatism, aretin-kozatra, maotera neuron aretina, aretim-po, diabeta, fiakaran'ny tosidrà, tsindrona volamena no nandray bebe andraikitra manan-danja kokoa.
Soraty ny olana ara-pahasalamana mba hahitana izay karazana fitsaboana hahazo tsindrona volamena.
Aretina & Email Inquiry